Any Myanmar, manolotra raozy fotsy ho an’ny Miozolomana mandritra ny Ramadany ny Bodista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2019 6:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Ελληνικά, македонски, Español, русский, বাংলা, 日本語, English
Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny Fanentanana Raozy Fotsy. Nahazoana alalana.
Tamin'ny 16 May 2019, nanomboka ny fanentanana ‘Raozy Fotsy’ izay hanomezana raozy ho an'ireo Miozolomana mifady hanina mandritra ny Ramadany ny vondrona Bodista tao an-drenivohitr'i Myanmar, Yangon. Natao ny fanentanana mba hanehoana ny firaisankina miaraka amin'ny Miozolomana taorian'ny nivorian'andian'olona Bodista manodidina ireo trano fivavahana Miozolomana vonjimaika maromaro ary nangataka ny hampitsaharana ireo fotoam-pivavahana.
Tamin'ny takarivan'ny 14 sy 15 Mey, vahoaka avy amin'ny Bodista mahery fihetsika mihoatra ny 100 no niezaka nanakana ny mpivavaka Miozolomana, nitaky ny hanakatonana ireo trano fivavahana vonjimaika miisa telo izay nosokafana ho fanajana ny Ramadany tany amn'ny faritra atsimon'i Dagon ao Yangon.
Ho setrin'izany, nanomboka ny fanentanana Raozy Fotsy ny moanina Bodista Bandatta Seidatta, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Asia Light (Jiron'i Azia) Sayardaw. Nitsidika ny vondrom-piarahamonin'ny Miozolomana tao atsimon'i Dagon tamin'ny takarivan'ny 16 Mey i Bandatta Seidatta mba hanolotra azy ireo raozy fotsy ho toy ny fomba hanomezana fampaherezana sy fanohanana azy ireo. Nanatevin-daharana ny fanentanana ireo mpikatroka avy amin'ny fivavahana samihafa, ary tao anatin'ny herinandro monja, dia niely tany amin'ireo tanàndehibe hafa manerana an'i Myanmar izany, anisan'izany ny tany Mandalay, Sagaing, ary Mawlamyine – ary tonga hatrany amin'ireo vondrom-piarahamonin'i Myanmar any Malezia mihitsy aza izany. Nitohy nandrisika ny olom-pirenena tao Myanmar hanolotra raozy fotsy ho an'ny namany na inona na inona foko sy fivavahana niaviany ny fanentanana.
Nandrisika ireo mpisera aterineto hizara lahatsoratra ao amin'ny tambajotra sosialy mampiseho ireo olona manolotra raozy fotsy ho an'ireo Miozolomana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenirohy # RaozyFotsyhoanyFandriampahalemana ihany koa ilay fanentanana.
Mivaky toy izao ny fanambarana avy amin'ny pejy ofisialin'ny fanentanana:
Ny raozy fotsy ho hetsika fandriampahalemana dia hetsika ataon'ny olom-pirenena ao Myanmar izay tia ny fandriampahalemana sy manome lanja ny fitoviana sy ny firindrana ara-tsosialy, amin'ny alàlan'ny fanoherana ireo izay mikasa hanaparitaka ny fankahalàna ary mandrisika ny tsy fahamarinan-toerana ara-poko sy ara-pinoana ao Myanmar amin'izao fotoana izao.
Ny fanentanana Raozy Fotsy tany Yangon. 27 Mey 2019. Avy amin'ny pejy Facebook-n'ny fanentanana Raozy Fotsy. Nahazoana alàlana.
Mandritra izany fotoana izany, namaly ny herisetra natao tamin'ireo Miozolomana ireo mpisera sasany tamin'ny fanovàna ny sarin'izy ireo niaraka tamin'ity sary namboarina notohanan'ny Tambajotran'ny Tanora Yangon ity:
Tsy misy toerana ho an'ireo fivavahana mahery fihetsika eto amin'ny firenenay.
Sary famantarana novokarin'ny Tambajotran'ny Tanora Yangon .
Betsaka mponina Bodista i Myanmar. Ny vondrona niforona tamin'ny 2014 antsoina hoe MaBaTha no nanomboka ny hetsika ataon'ny Bodista mahery fihetsika any Myanmar ankehitriny. Na dia nambaran'ny andrim-panjakna fa tsy ara-dalàna aza ny MaBaTha dia nanome aingam-panahy ny hetsiky ny mahery fihetsika 969 tamin'ny fanavakavahana niely patrana sy ny fankahalana misongadina tamin'ny aterineto manohitra ny Miozolomana vitsy an'isa ao amin'ny firenena ny hetsika izay nataon'ity vondrona ity sy ny mpitarika azy Wirathu. Hatramin'ny taona 2012, niaina tranga maro mikasika ny fifandonana ara-pivavahana manerana ny firenena i Myanmar, anisan'izany ny herisetra goavana iraisam-paritra teo amin'ny Miozolomana Rohingya sy ny Bodista Rakhine.
Mba hanarenana ny firindra ara-tsosialy eo amin'ireo Bodista sy ny Miozolomana any Myanmar, mihevitra ny mpitarika ny fiarahamonim-pirenena, Thet Swe Win, fa tokony hanamafy ny fitenenana momba ny fifandrindran'ny fiarahamonina ny mpitondra fanjakana. Hoy izy nandritra ny antsafa vao haingana nataon'ny Sampam-baovao Irrawaddy :
Misy lanjany lehibe amiko ny fitarihana ara-moraly avy amin'ny mpitondra politika. […] Raha lazaina amim-pahatsorana dia tsy mahavita manome ny fitarihana ara-moraly ny mpitondra antsika. Rohingya an-tapitrisany no nandositra ary maro ny olona maty. […] Fara faharatsiny izy ireo tokony hiaiky ny lafiny maha-olona fa miaina any amin'ny firenena ry zareo ary sahirana amin'izao fotoana izao rehefa nandao ny firenena. Mijaly ny Miozolomana, ary mijaly ny vahoaka Arakanina amin'izao fotoana izao, ary toy izany ihany koa ireo vahoaka Kachin sy ny vahoaka Shan. Raha tsy mamaritra ny fenitra sy ny soatoavin'ny fiarahamonina ny mpitondra izay vao hanaraka ny vahoaka. […] Indray andro any, raha hisy mpitondra sahy milaza fa tsy manana toerana ho an'ny vahoaka izay manana fihetsika tsy araka ny foto-pisainana toy izany ny firenena, ary sahy mamaritra ny fenitra ara-moraly mazava ho an'ny fiarahamonina dia azo antenaina fa hisy fiovàna eto amin'ity fiarahamonintsika ity.